Nanomboka tamin’ny volana oktobra lasa teo no tapaka izany, raha ny fanazavan’ny talen-tsekoly, hany ka maro amin’ireo mpianatra no lasa tsy mazoto mianatra intsony ankoatra ireo nitsoaka an-daharana. Nanomboka ny volana janoary lasa teo no nitrangan’izany, fotoana tena tsy hananan’ireo ray aman-dreny vola ka hatramin’izao. Mba ho fanampiana ireo mpianatry ny EPP Andraharo ireo ary dia tonga nanolotra sakafo atoandro ho azy ireo ny Alarobia teo ny fikambanana Rotary Club Ivandry sy ny orinasa Star izay miorina eny Andraharo. Ity farany no nanolotra ny vola nikarakarana izany izay fantatra fa mbola hitohy any amin’ny EPP hafa eto an-drenivohitra. Isaky ny alarobia voalohan’ny volana no hotanterahina izany ka EPP miisa 11 no ezahina hotratrarina hatramin’ny faran’ny taona. Mitentina 35 tapitrisa Ar kosa no vola holaniana. Mpianatra 600 isaky ny sekoly no omena sakafo izay misy vary sy laoka, tsindrin-tsakafo ary ranom-boankazo vokarin’ny orinasa Star.